Iifowuni zePaulic phone phone JWAT203 ikhathalogu, i-china yeefowuni zeefowuni zePubic zefowuni iJWAT203 ikhathalogu abavelisi, abaxhasi, abaFektri - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Ulapha : Ikhaya>imveliso
Ifowuni yokuhlawula iifowuni I-Pubic yefowuni ikhathalogu yeJWAT203
Igama lemveliso: Ifowuni yokuhlawula iifowuni zePubic IJWAT203
The Iifowuni zokuhlawula zangaphandle lukhetho olufanelekileyo lokubonelela ngonxibelelwano olufanelekileyo kwiindawo zangaphandle umz. Izitalato, iipaki, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, izitishi zebhasi / zikaloliwe.
Ngamaqhosha ama-4 okukhawulezayo ukucofa ngokukhawuleza.
Inombolo yokudayala ingasetwa okanye iguqulwe njengoko kufuneka
Unayo yonke imisebenzi yefowuni eqhelekileyo
Ukumelana High etshabalalisayo, ukuthembeka phezulu, manzi kunye ukufuma-ubungqina
Ukulungele imeko yoluntu engaphandle, enje:
Izitalato, iipaki, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, iiplaza;
Izikhululo zebhasi / zikaloliwe;
Iilwandle, amadama okuqubha, iigalufa.
1.Standard I-Analogue yefowuni. Umgca wefowuni oxhotyisiweyo.
Izindlu 2.Robust, yakhiwe ngentsimbi ebandayo liqengqiwe umgubo wawutyabeka
I-Keypad ye-alloy yekhiphedi eneefowuni ezi-4 zokucofa ngokukhawuleza.
I-5.Magnetic switch switch nge-reed switch.
6.Imakrofoni yokucima ingxolo ekhethiweyo
7.Uphakanyisiwe, Ufakelo olulula.
8.Khusela ubungqina ubungqina be-IP54.
9.Uqhagamshelo: I-RJ11 isikwere isiphelo sentambo.
10.Umibala ogcweleyo okhoyo.
11.Ifowuni eyenziwe ngasese yefowuni ekhoyo.
Ukuba unayo nayiphi na ingcamango malunga ne-analog yethu yemizi-mveliso / umnxeba kaVoip woluntu waselwandle / kaloliwe / kwizibuko / kwizibuko / kuhola wendlela / kwiprojekthi yeTonela okanye nantoni na eyenye, i-Ningbo Joiwo Explosionproof yamkela ngokufudumeleyo imfuno zakho, kunye ne-R & D yobungcali kunye neminyaka yeenjineli ezinamava, sinako Yenza isisombululo sethu sokuhlangabezana neemfuno zakho zeshishini.
U-Ningbo Joiwo uqhushumbo ngokukodwa kwifowuni yoshishino njenge-IP okanye inkqubo yefowuni ye-analog, umnxeba wemozulu, umnxeba wobungqina bokuqhuma, ifowuni yefowuni, izandla zomnxeba, umnxeba woluntu kunye nomnxeba wasejele. imboni, i-Tunnel, i-metro, uloliwe, isantya, ulwandle, inqanawa, elunxwemeni, eyam, isityalo samandla, ibhulorho, ihotele, isibhedlele, intolongo.
Ukuqhuma okuChaphazeleka kwetyhubhu yeTyhubhu yoMnxeba woLumkiso Ubungqina beTyhubhu
Iindonga zebhanki zentsimbi eziqengqiwe zentsimbi eluncedo yasendlini-JWAT202
Ikhamera yobungqina bokuqhekeza